Abenzi bePulatifomu Yomsebenzi we-Aluminium | Ifektri yaseChina Aluminium Work Platform
Ipulatifomu yomsebenzi we-Aluminiumuhlobo olusebenza mpo lwendawo yesikhulumi somsebenzi wasemoyeni olunesisindo esilula esikahle ukuhambisa.Kunemodeli eminingi oyinikezayo ongayikhetha, ipulatifomu yomsebenzi owodwa wensimbi ye-mast aluminium, ipulatifomu yomugqa womsebenzi we-aluminium kanye nohlobo lwendawo oluzihambelayo. Imishini isebenzisa amaphrofayli we-aluminium alloy ephezulu ukunciphisa ngempumelelo ukuphakama nokuphakamisa.
I-China Aerial Work Plaform Telescopic Type Good Supplier Inani
Uhlobo lwe-China Aerial Work Platform Telescopic nge-Self propelled Control Mode ngumkhiqizo omusha esiwushicilele muva nje.Izinzuzo ezinhle kakhulu ukuthi Ipulatifomu yasemoyeni ingumnikazi wevolumu encane kakhulu engenza ukuthi isebenze kahle esikhaleni esincane noma endlini yokugcina impahla.Ngaphandle kwalokho, wonke umklamo nobuciko kuhle kakhulu! Xhumana nawe
Ipulatifomu Yomsebenzi Wasemoyeni Ongayedwa inesakhiwo seCompact, ingangena endimeni encane; iphrofayli ye-aluminium ephezulu enamandla, isisindo esincane, amandla aphezulu, ukuphakamisa okuzinzile, akukho migqa yokulenga, i-jitter ekhasayo, akukho msindo ongajwayelekile;
Ngokwesisekelo seplatifomu eyodwa esebenza ngezinsimbi ze-aluminium, ipulatifomu yomsebenzi ombaxambili we-mast aluminium ikhulisa indawo yetafula futhi iphakamise ukuphakama kwepulatifomu, ukuze ikwazi ukuzivumelanisa nokusebenza okuphezulu kwezindiza.
Ukucushwa Okuphezulu kwe-Double Mast Aluminium Aerial Work Platform kunezinzuzo eziningi: Umsebenzi we-Outrigger interlock, umsebenzi we-deadman switch, ukuphepha okuphezulu lapho kusebenza, amandla e-AC kungxenyekazi yokusetshenziswa kwamathuluzi kagesi, i-valve yokubamba isilinda, umsebenzi wokulwa nokuqhuma, imbobo ejwayelekile yefoloko yokulayisha kalula .
Ukucushwa Okuphezulu Ipulatifomu Yomsebenzi Wasemoyeni Omningi unezinzuzo eziningi, umsebenzi we-Four Outrigger Interlock, umsebenzi we-Deadman switch, ukuphepha okuphezulu lapho kusebenza, amandla e-AC epulatifomu wokusetshenziswa kwamathuluzi kagesi, i-Cylinder Holding Valve, umsebenzi wokulwa nokuqhuma, imbobo ejwayelekile yefolokhwe yokulayisha kalula. .....
I-Manual Lifting Aluminium Aerial Work Platform ilula, ayisindi futhi kulula ukuyihambisa. Ifanele ukusetshenziswa endaweni encane yokusebenza. Umsebenzi angayisusa futhi ayisebenzise. Kodwa-ke, umthamo wokulayisha uphansi futhi ungathwala kuphela impahla elula noma amathuluzi. Udinga abasebenzi ukuthi baphakamise ifoni ngesandla ukuze .....
Yamukela iyunithi ebalulekile yokubacindezela, ne-cartridge valve, nomsebenzi wokwehlisa isimo esiphuthumayo. Imodeli ngayinye ingahlonyiswa ngamandla webhethri ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Hlakulela iyunithi kagesi ezimele edidiyelwe, efakwe ukuvikelwa kokuvuza nokuvikelwa ngokweqile. Le mishini yakhelwe ngamapaneli wokulawula amabili azimele ukuze abasebenzi bakwazi ukulawula imishini kungakhathalekile ukuthi basepulatifomu noma phansi. Ngaphezu kwalokho, kufanele sincome ngokugcizelela ipulatifomu yethu yokusebenza kwe-aluminium. Abasebenzi bangalawula ngqo ukunyakaza nokuphakanyiswa kwemishini etafuleni. Lo msebenzi uwenza uphumelele ngokwedlulele lapho usebenza endaweni yokugcina impahla futhi ugcine isikhathi sokusebenza sokuvula nokuvala imilenze.